Kooxda Jwxo-shiil, oo Dabo Galis u Noqotay Mucaaradka Itobiya – Rasaasa News
Jul 21, 2009 Jwxo-shiil, Jwxo-shiilada
Dadweynaha Somalida Ogadeeniya wakhti hore ayey ogaadeen in Jwxo-shiil iyo Jwxo-shiilada midkoodna doonaynin in uu halganka Somalida Ogadeeniya uu hore u socdo, markhaatigii ugu dambeeyeyna waxay ahayd warqadii dacwada ahayd ee R/wasaaraha Itobiya la doonayey in la hor dhigo oo ay kooxda Jwxo-shiiladu diideen in ay saxiixaan [Ogaden Petition to UK Prime Minister]
Waxaa muddo dheer soo jiitamayey qorshe uu Jwxo-shiil iyo haada daba socotaa ku doonayeen in ay ku badalaan jahada halgan ee ay ku jiraan dadweynaha Somalida Ogadeeniya ee ay horsocoto Jabhada Wadaniga Xoreynta Ogadeeniya [Jwxo].
Jwxo-shiil oo Eebahay amarkii uun halganka Somalida Ogadeeniya ku soo dhex galay ayaan waligii daacad ka noqonin maaadiida Jwxo, waxaana uu waligiiba jeclaa oo uu maleegayey sidii uu heshiis nabadeed ula gaadhi lahaa xukuumada Tigray, waxaana uu dhawr goor oo hore u diray qoraalo uu u sii dhiibay Cabdulahi Yusuf oo ahaa dilaalka [dealer] Jwxo-shiil iyo KT Malise.
Waxaa uu Jwxo-shiil, Cabdulahi Yusuf u sheegay in hadii uu heshiis la gali lahaa Itobiya ay hortaagan yihiin rag ka mid ah aas aasayaashii ururka Jwxo, oo reer Cabdile ah oo uusan gacan dhaafi karin inta ay Jwxo ku jiraan. Jwxo-shiil waxaa lagu maal galiyey in uu wax ka qabto ragaas uu sheegayo, oo uu la yimaado urur uga dambeeya go,aamada madaxtinimo.
Waxaana kolkii ugu horeysay uu Jwxo-shiil meel iska dhigay shuruucda ururka Jwxo, waxaana uu jidaystay in uu xoog ku joogo hogaanka madaxtinimo ee ururka iyada oo aanay dhicin wax doorasho ah.
Talaabadii labaad ee uu Jwxo-shiil qaaday waxaa ay ahayd in uu xuubsiibo halgamayaalkii Jwxo ee dibadaha uga doodi jiray dadweynaha Somalida Ogadeeniya xiligii uu ahaa Jwxo-shiil, xoghaya faafinta XHKS. Waxaan ula jeedaa Dr. Dolal, oo ahaa ninka ugu kaydka waraysiga badan ee halganka Somalida Ogadeeniya, Jwxo-shiil waxaa uu ku amaray wiilasha uu adeerka u yahay ee waday boggii ay Jabhadu lahayd ee Ogaden.com in laga suuliyo wax alaale wixii raad ah ee uu ku lahaa Dr. Dolal.
Waxaa xigay in Jwxo-shiil, uu xidhiidh la samaysto Jabhado mucaarad ah oo ka soo jeeda Itobiya, kuwaas oo aragtida ay qabaan ee Ogaden ay la mid tahay mida uu ay qabto xukuumada Itobiya arintaas oo dhacday 2005 dalka Holand. Sanadkii 1991, Dr. Dolal waxaa uu diiday shirkii London ee loo qabtay qoomiyadaha Itobiya waayo aragtida Jwxo, ma aha mid xukun ee waxaa weeye mid gumaysi. Waxaana halkaas ka baxay mabaadiidii ururka ee ahayd xornimo doon oo u muuqday maamul doon, hadii ay Jwxo maamul doon tahay eegaba waxaanu haysanaa Kilalka 5aad, oo aanu hoe u diidnay.
Waxaa kale oo arinytan xigay in uu Jwxo-shiil, khilaaf xoog leh dhex galiyo ururka isaga oo isku dayey in uu meesha ka saaro xubnaha aan la qabin fikirka ah in Itobiya wax lala qaybsado.
Jwxo-shiil, waxaa uu 2006 isku dayey in uu khaarajiyo Dr. Dolal iyo xubno kale oo kolkaas aad uga soo horjeeday Jwxo-shiil sida uu wax u wado ayna sax ahayn, isku daygii dil ee xiligaas Eebahay kuma guulayn. Waxaa kale oo uu doonayey in uu xiligaas dilo, xubnahaas Jwxo oo kolkaas fikirkiisa ka soo horjeeday, balse ogaaday in uu xidhiidh u socdo isaga iyo xukuumada Itobiya. xubnahaas waxay ogaadeen in ayna ku noolaan karin geeska Afrika marba hadii uu Jwxo-shiil doonayo in uu xidhiidh la yeesho xukuumada Itobiya, waxayna xubnahaasi qaateen dil inta uusan ku dilin, waxaana ka mid ahaa xubnahaas Ina Yusuf Taani iyo Sulub Cabdi Cabaas oo iyag u si ay naftooda u badbaadiyaan u galay cadowga.
Dr. Dolal iyo xubno ay isku fikir ahaayeen ayaa waxay damceen in la kulmo si loo saxo khilaafka, nasiib daro waxaa uu Jwxo-shiil duufsaday xunihii kale ee ka soo horjeeday hanaanka uu wax u wado. Waxayna garabkiisa ka baxeen Dr. Dolal iyo xubnihii kale ee ay isla socdeen, waxaan ilaa iyo hada la ogayn wax uu Jwxo-shiil u sheegay ama u balan qaaday xubnahaas.
Waxaana bilaabatay in uruku uu si cad u kala Jab oo uu noqdo labo garab, Dr. Dolal oo 2006 ka baxsaday isku day dil oo uu damacsanaa in uu Jwxo-shiil ku dilo, ayaa waxaa uu galay gudaha Ogadeeniya, waxaana si deg deg ah uga dabo galay Jwxo-shiil, bishii January 17, 2009 ayaa Dr. Dolal waxaa Dilay ciidan uu u diray Jwxo-shiil.
Waxaana dilkaas aad ugu farxay xukuumada Itobiya Kililka 5aad iyo kooxda Jwxo-shiil. Kooxda Jwxo-shiil waxay filayeen in ay u suurto gasho ujeedadoodii gaabnay ee ahayd in ay noqdaan mucaarad Itobiya, waxaase ogaaday waxa ay yihiin dadweynaha Somalida Ogadeeniya.
Waxaana ilaa maanta laga filayaa beesha Jwxo-shiil in ay geeka soo fadhiistaan oo ay ka xaajo qaataan dilkii Dr. Dolal, waxayse arintaas ku badalayaan in ay abaabulaan kooxo wax ma garad ah oo uu ugu horeeyaan saaxiibadii Dr. Dolal.
Kooxda Jwxo-shiil waxaa ay maleegayaan talaabooyinkii ugu dambeeyey ee ay kaga siiban lahaayeen dunuubta, waxayna kulano kula yeesheen washington DC dhawr kooxood oo mucaarad Itobiya ah oo ay ka mid yihiin Oromo oo uu matalayo Da’ud Ibssa iyo koox mucaarad Axmaaro ah oo uu matalayo Berhanu Nega, waxaana ay si wada jira ula kulmeen ninka KT Malise uu doonayo in uu ku wareejiyo hogaanka Itobiya waana wasiirka caafimaaadka ee Itobiya oo u dhashay Qomiyada Tigray.
Hadaba, waxaa isweydiin leh halganku ha burburo oo waa la arkaa kooxda Jwxo-shiil ayaana masuul ka ah, maxayse ka helayaan hadii ay eegga la heshiiyaan Itobiya. Jwxo-shiil iyo saddexda nin ee la socotase ma waxay u malaynayaan in lagu cafiyi dhiiga Dr. Dolal oo ay nabad ku dhex joogi dadweynaha Somalida Ogadeeniya. Jawaabtu waa maya.